Technorati laharana WordPress Plugin Version 2.0.4 Navoaka | Martech Zone
Alahady 22 aprily 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Nahitsiko (tamin'ny farany) ny olana iray tamin'ny Technorati Rank WordPress Plugin manitsy olana iray amin'ny tsy fahaizany manoratra na manokatra rakitra cache. Nanampy cache subdirectory amin'ny plugin aho ary ankehitriny dia tahirizo ao anaty lahatahiry ilay rakitra cache.
Ny plugin dia mbola mitaky PHP5 + (SimpleXML) ary ny hamolaka tranomboky. Raha tsy manana ny farany sy lehibe indrindra ny mpampiantrano anao dia mamporisika anao aho hanatsara ho mpampiantrano vaovao. Hahita tapakila ho an'ny a taona maimaim-poana ny fampiantranoana miaraka amin'ny mpampiantrano ahy ao amin'ny RSS.
Ho fanampin'izay, miasa amin'ny fanatsarana ity plugin ity aho miaraka amina endrika sary fanampiny (misaotra an'i Technorati ho fanampiana kely any!). Amin'ny fotoana malalaka rehetra - mazava ho azy!
Prapta: Eto daholo ny zava-drehetra
Apr 22, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Vao nampiditra ny bilaoginao tamin'ny tiako aho.
Ny anarako technorati dia gavino.
Azonao atao ny manampy ny bilaogiko amin'ny favanao amin'ny fipihana ity rohy ity.
mety mieritreritra ahy ho adala ianao fa tsy olona IT aho.
Nametraka ny plugin Technorati Rank aho saingy mahazo ity hafatra ity foana aho.
Ho afaka hilaza amiko ve hoe diso aho?
Apr 23, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Tsy adala mihitsy chinam! Ny plugin dia miasa amin'ny alàlan'ny fanoratana kopian'ny valiny amin'ny lahatahiry mba tsy hifandraisany amin'ny Technorati isaky ny mandeha. Io dia antsoina hoe 'caching'. Amin'ity tranga ity dia hita fa tsy manana alalana mifanentana aminy ny plugin hanoratra amin'ny lahatahiry plugin / cache. Raha afaka mametraka permis ao amin'io lahatahiry io dia mila ovaina izy ireo hanana fahazoan-dàlana feno (CHMOD 777).
Apr 28, 2007 amin'ny 8: 03 AM
Misaotra tamin'ny plugin WP anao, Douglas. Nahita bug kely tao amin'ny interface admin izay mety tokony ahitsinao: ny boaty select cache dia tsy mandeha tsara. Izany dia noho ny filahanao:
raha (($ wptr_hours == "4") || ($ wptr_hours = ""))
hametraka ny safidio raha toa ka tsy voalamina mialoha. Azoko antoka fa hitanao fa mila 'fampitahana' amin'ny tranga faharoa ianao fa tsy 'andraikitra' - izay manala ny sandan'ny $ wptr_hours, noho izany dia tsy mifidy ny safidy rehetra ary miafara amin'ny '1 'par default. Manantena aho fa hanampy izany!
Apr 28, 2007 amin'ny 10: 16 AM
Misaotra ny mahita Dan! Nanao ny fanovana aho ary nampakatra ny v 2.0.5:
raha (($ wptr_hours ==? 4?) || ($ wptr_hours === null))
Jul 7, 2007 amin'ny 10: 00 AM
Misaotra an'ity plugin Douglas ity.
Hitako fa manana toerana tsara ao Technorati ny bilaoginao. Tohizo fa tsara!
Jul 7, 2007 amin'ny 10: 35 AM